ချို့တဲ့မှုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ချို့တဲ့မှုများ	7
Posted by naywoon ni on May 14, 2015 in Poetry |7comments
သူတစ်​ပါး နှာ​ခေါင်း​ပေါက်​ကိုအားကိုးရတယ်​ ။
​သွေးထုတ်​လုပ်​ဖို့ နှလုံး ပါမလာရှာဘူး
ဒါ​ကြောင့်​ တစ်​​နေရာက တစ်​​နေရာ ​ရွေ့ဖို့
တစ်​ခြားက​ယောက်​က ထမ်းပိုး​ပေးရဖို့လိုတယ်​ ။
လူတန်းစားတစ်​ရပ်​ သီးသန့်​​ပေါ်လာရ​တော့တယ်​ ။ ။
2015 May 14 About naywoon ni
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: လူတချို့ကျ .. အုံးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကြား
သည်တော့ … သူများတိမ်းရာ လိုက် ယိမ်းကြရော …..
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ချို့တဲ့မှုတွေများပြီး အကျီလည်ပင်းပေါက်ပဲ ကျယ်လာပီး ခေါင်းမကြီးလာတဲ့လူတွေနဲ့တော့..
ဘယ်ပီးရင် ညာကိုတိုး ညာပီးရင် ဘယ်ကိုတိုးပဲ ဖြစ်နေဦးမှာဘာဘဲာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လူတန်းစာက ပေါ်တာကြာနေပြီ။
Ma Ma says: မူလတန်းတုန်းက သင်ဖူးတာတော့ …
သူများနှာခေါင်း အငှားတောင်း အကောင်းမဟုတ်ရှင့် တဲ့။
အငှားပေးတဲ့သူကိုပဲ အပြစ်ပြောရမလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တကယ်ပါမလာရင် ပေးပျော်ပါသေးတယ် ….
Alincho says: ဒီလိုလူ​တွေများလာ​တော့
လူများစုနဲ့ လူနည်းစု ဘာကြောင့် လူနည်းစုက နိုင်နေရတာလဲ???
Alinsett @ Maung Thura says: ချို့နဲ့မှုတွေ ကျုပ်တို့ ဗမာပြည်ထဲမှာ နေသားကျနေပြီ။